नेप्रोक्सेन बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर चेकआउट कल्याण खेलहरु कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार घरपालुवा जनावर भारी खेल कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण कम्पनी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> नेप्रोक्सेन बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेन एनएसएआईडीहरू हुन् (विभिन्न न्यान्टेरोइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स) जुन विभिन्न अवस्थाबाट पीडा र सूजनको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। NSAIDs ले प्रोस्टाग्लैन्डिन भन्ने रसायन अवरुद्ध गरेर काम गर्दछ। प्रोस्टाग्लैण्डिनले दुखाइ र जलन पैदा गर्दछ। प्रोस्टाग्लैन्डिन रोक्नाले, NSAID ले दुखाइ र जलनको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ। दुबै नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेन NSAIDs को रूपमा चिनिन्छन् र धेरै समानताहरू छन्, तर तिनीहरूमा केही भिन्नताहरू छन्।
नेप्रोक्सेन बनाम आइबुप्रोफेनको बीचमा मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
नेप्रोक्सेन, वा नेप्रोक्सेन सोडियम, ब्रान्ड नाम, नेप्रोसिन, साथै ओभर-द-काउन्टरलाई अलेभको रूपमा चिनिन्छ। यो जेनेरिक फार्ममा एक्लै पनि उपलब्ध छ (प्रिस्क्रिप्सन, र OTC कम डोजमा) र अन्य औषधिहरूको साथ संयोजनमा। इबुप्रोफेनलाई मोट्रिन र एडविल नामले चिनिन्छ, र यो जेनेरिक फार्ममा एक्लै र अन्य औषधिहरूको साथ संयोजनमा पनि उपलब्ध छ। Dosing संकेत द्वारा भिन्न हुन्छ, र OTC खुराक पर्ची खुराक भन्दा कम छ। साथै, आईबुप्रोफेन छोटो-अभिनय हो र नेप्रोक्सेन भन्दा धेरै पटक dosed हुन्छ, जुन लामो अभिनय हो र कम बारम्बार गर्न सकिन्छ।
किनभने दुबै ड्रग्स विभिन्न प्रकारका संयोजनमा उपलब्ध छन्, जस्तै धेरै खान्ना र चिसो औषधिहरू र निद्रा सुत्रहरू, ओटीसी उत्पादन लिने बेला, तपाईंको फार्मासिष्टसँग परामर्श लिनु राम्रो विचार हो यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाईं आफ्नो उत्पादनको लागि सही उत्पादन छनौट गर्दै हुनुहुन्छ। लक्षण साथै, नेप्रोक्सेन वा आइबुप्रोफेन समावेश गर्ने धेरैजसो संयोजन उत्पादनहरूमा एक उत्पाद हुन सक्छ जुन तपाईंको मेडिकल अवस्था (हरू) वा तपाईंले लिनुहुने अन्य औषधी (हरू) सँग उपयुक्त नहुन सक्छ। बच्चाहरूको लागि औषधि छनौट गर्दा, सधैं तपाईंको बाल रोग विशेषज्ञ वा फार्मासिस्टसँग सल्लाह गर्नुहोस् बच्चाको उमेर र वजनको आधारमा उपयुक्त खुराकको लागि।
नेप्रोक्सेन बनाम आईबुप्रोफेन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग NSAID NSAID
ब्रान्ड नाम के हो? एलेभ, एनाप्रोक्स डीएस, नेप्रोसिन मोट्रिन, सल्लाहकार
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेटहरू, क्याप्लेटहरू, सॉफ्टगेल्सहरू ट्याब्लेटहरू, क्याप्लेटहरू, सॉफ्टगेल्सहरू, तरल फारमहरू
मानक खुराक के हो? वयस्क ओटीसी: २२० मिलीग्राम प्रत्येक to देखि १२ घण्टा
वयस्क Rx: 250-500 मिलीग्राम प्रत्येक 12 घण्टा
*खानासँग खाऊ वयस्क ओटीसी: २०० मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा (अधिकतम १२०० मिलीग्राम प्रति दिन)
वयस्क Rx: -००-8०० मिलीग्राम दैनिक3देखि times पटक (अधिकतम 00२०० मिलीग्राम प्रति दिन - डा। परामर्श लिनुहोस्)
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? स by्केतद्वारा फरक हुन्छ स by्केतद्वारा फरक हुन्छ
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क, २ बर्ष र माथिका बच्चाहरू वयस्क, months महिना र माथिका बच्चाहरू
सर्तहरू नेप्रोक्सेन र आइबुप्रोफेन द्वारा उपचार
नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेन दुई लोकप्रिय औषधिहरू हुन् जुन दुखाइ र जलनको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। दुबै औषधिहरू संधिशोथ, ओस्टियोआर्थराइटिस, हल्कादेखि मध्यम दुखाइ, र प्राथमिक डिस्मेनोरिया (मासिक धर्म क्रम्प) को लक्षण र लक्षणहरूलाई कम गर्नका लागि संकेत गरिएका छन्। नेप्रोक्सेनलाई टेंन्डोलाईटिस, बर्साइटिस, एक्युट गाउट, एन्कोइलोजिंग स्पोन्डिलाइटिस, र पोलियर्टिकुलर किशोर इडिओपाथिक गठिया को लक्षणको राहतको लागि पनि संकेत गरीएको छ।
सर्त नेप्रोक्सेन इबुप्रोफेन
तीव्र गाउट हो अफ-लेबल
Polyarticular किशोर इडिओपाथिक गठिया हो अफ-लेबल
हल्का देखि मध्यम दुखाइ हो हो
प्राथमिक डिसमेनोरिया हो हो
के नेप्रोक्सेन वा आइबुप्रोफेन बढी प्रभावकारी छ?
दुई अनियमित, डबल-अन्धा, प्लेसबो-नियन्त्रण अध्ययन ओन्टीओआर्थराइटिसको लागि नेप्रोक्सेनलाई आइबुप्रोफेनसँग तुलना गर्ने, दुबै ड्रग्सलाई एक हप्तासम्म ओटीसी (तल्लो) डोजमा हेरे, र पत्ता लगाए कि दुबै ड्रग्स कम दुखाइमा प्रभावकारी थिए। नेप्रोक्सेन थोरै बढी प्रभावकारी, र रातको दुखाइ कम गर्नमा बढी प्रभावशाली देखियो। दुबै औषधि राम्रोसँग सहन गरिएको थियो।
अर्को सानो अध्ययन आईब्रुप्रोफेन लाई नेप्रोक्सेन तुलना गर्दै दुबै औषधिहरू कठोरता कम गर्ने, आराम गर्ने दुखाइ, आन्दोलनको दुखाइ, रातको दुखाइ, दैनिक क्रियाकलापको साथ रोगको हस्तक्षेप, र समग्र रोगको गम्भीरता कम गर्नमा सहयोगी हुन पाए। यस अध्ययनमा नेप्रोक्सेन बढी प्रभावकारी भएको पाए। धेरै बिरामीहरूले साइड इफेक्टहरू अनुभव गरे, प्राय जसो हल्का जीआई मुद्दाहरू; यद्यपि, नेप्रोक्सेन लिने एक बिरामीको GI रगत थियो।
औषधि cialis को लागी प्रयोग गरीन्छ
२० बर्षमा NSAIDs को समीक्षा , लेखकहरूले एक NSAID छनौट गर्न कठिनाई पहिचान र भन्नुभयो कि अक्सर, एनाल्जेसिक छनौट प्रमाण भन्दा व्यक्तिगत अनुभव मा आधारित छ। उनीहरू भन्छन कि अधिकांश अध्ययनहरू तीव्र अवस्थाको सट्टा तीव्रको लागि हो, र यी अध्ययनहरूले प्रभावकारी रूपमा कुन NSAID उत्तम हो निर्धारण गर्न सक्दैन। लेखकहरूले NSAID को कम भन्दा कम समयको कम अवधिको लागि प्रयोग गर्नुको महत्त्वलाई जोड दिए। उनीहरूले सुझाव दिन्छ कि जब टायलेनोल (एसिटामिनोफेन) पर्याप्त हुँदैन, तब इबुप्रोफेनको कम खुराकको साथ सुरु गर्नु उत्तम हुन्छ (जीआई प्रभावको उच्च जोखिममा भएकाहरूलाई पेट बचाउन औषधि सहित)।
किनभने प्रमाण बरु अपूर्ण छ, सबैभन्दा प्रभावकारी औषधी तपाईको डाक्टरले निर्धारण गर्नु पर्छ, जसले तपाईको मेडिकल अवस्था र ईतिहासलाई ध्यानमा राख्छ, र तपाईले लिने अन्य औषधीहरू।
नेप्रोक्सेन मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
नेप्रोक्सेन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र लागत नेप्रोक्सेन बनाम आईबुप्रोफेनको तुलना
नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेन उचित मूल्य छन्, दुबै ओटीसी र आरएक्स संस्करणमा। दुबै औषधिहरू सामान्यतया बीमा र मेडिकेयर पार्ट डी द्वारा प्रिस्क्रिप्सन-शक्ति फारममा ढाकिएका हुन्छन्। नेप्रोक्सेन को लागी एक सामान्य नुस्खा ,०, .०० मिलीग्राम ट्याबलेट को लागी र बीमा बिना $ -०-। Cost० को लागी हुनेछ। आइबुप्रोफेन को लागी एक सामान्य नुस्खा ,०, .०० मिलीग्राम ट्याबलेट को लागी र बीमा बिना $ १$ को लागी हुनेछ। बीमा र मेडिकेयर पार्ट डी कापीहरू योजनामा ​​फरक हुन्छन्। तपाईं नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेनमा एकलकेयर कूपन प्रयोग गरेर पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? हो - नुस्खा-शक्ति मात्र हो - नुस्खा-शक्ति मात्र
सामान्यतया चिकित्सा भाग डी द्वारा कभर? हो - नुस्खा-शक्ति मात्र हो - नुस्खा-शक्ति मात्र
मानक खुराक # ,०, mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेट # ,०, mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेट
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे भाग डी -20 ०-२० $ ०-२२
एकलकेयर लागत $ 9- $ 20 $ $ $।
नेप्रोक्सेन बनाम आइबुप्रोफेनको साइड इफेक्टहरू
किनकि नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेन दुबै एनएसएआईडी हुन्, दुबै औषधीहरूको लागि साइड इफेक्ट समान छ। सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (GI) हुन् जसमा ईर्ष्या, पेट दुख्ने, कब्ज, र / वा पखाला समावेश छन्। केही बिरामीहरूले पनि मतली, चक्कर, वा टाउको दुख्ने अनुभव गर्दछन्।
साइड इफेक्टको पूर्ण सूचीको लागि स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
ईर्ष्या हो --%% हो १-१-16%
मतली हो --%% हो १-१-16%
पेट दुख्ने हो --%% हो १-१-16%
कब्ज हो --%% हो १-१-16%
पखाला हो <3% हो १-१-16%
टाउको दुखाई हो --%% हो १- 1-3%
चक्कर हो --%% हो --%%
तन्द्रा हो --%% हैन -
प्रुरिटस (खुजली) हो --%% हो --%%
टिन्निटस (कानमा बज्दै) हो --%% हो १- 1-3%
सूजन (सूजन) हो --%% हो १- 1-3%
डिस्प्निया (सास फेर्न) हो --%% हैन -
स्रोत: डेलीमेड (नेप्रोक्सेन) , डेलीमेड ( आइबुप्रोफेन )
नेप्रोक्सेन बनाम आईबुप्रोफेनको ड्रग अन्तर्क्रिया
नेप्रोक्सेन वा आईबुप्रोफेन कोन्माडिन (वारफेरिन) जस्ता एन्टीकोआगुलेन्टसँग लिनु हुँदैन, किनकि यसले रक्तस्रावको जोखिम बढाउन सक्छ। नेप्रोक्सेन वा आईबुप्रोफेनलाई अन्य NSAIDs, जस्तै एस्पिरिनको साथ लिदा पनि रक्तस्राव र GI साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ। नेप्रोक्सेन वा आईबुप्रोफेनले धेरै रक्तचाप औषधिहरू अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्, एसीई इनहिबिटरहरू, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लकरहरू, बीटा ब्लकरहरू, र डायरेटिक्स सहित। दुबै औषधिहरूले एन्टिडिप्रेसन्ट्सको धेरै कक्षाहरूसँग पनि कुराकानी गर्दछ, सम्भवतः रक्तस्राव (सम्भावित जीवन-जोखिम), साथै कम सोडियमको कारण। औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा पेशेवरको सल्लाह लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास नेप्रोक्सेन इबुप्रोफेन
कौमाडिन (वारफेरिन) एन्टिकोआगुलेन्ट / रगत पातलो हो हो
अन्य NSAIDs NSAIDs हो हो
वासोटेक (इनालाप्रिल) ACE अवरोधकर्ताहरू हो हो
दीओभान (वाल्सरतान) एआरबी (एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लकरहरू) हो हो
टेनोर्मिन (atenolol) बीटा ब्लकरहरू हो हो
जोलोफ्ट (सेटरलाइन) एसएसआरआई (छनौट सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू) हो हो
सिम्बल्टा (डुलोक्सेटिन) SNRI (सेरोटोनिन र norepinephrine reuptake अवरोधकर्ता) हो हो
ल्यानोक्सिन (डिजोक्सिन) कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो हो
एन्ट्यासिडहरू एन्ट्यासिडहरू हो हो
Carafate (Sucralfate) संरक्षक हो हैन
Questran (cholestyramine) पित्त एसिड क्रमबद्ध हो हो
नेप्रोक्सेन बनाम आईबुप्रोफेनको चेतावनी
किनभने दुबै नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेन एनएसएआईडी हुन्, उनीहरूसँग समान चेतावनी छ:
त्यहाँ एक बक्से चेतावनी छ (एफडीएले आवश्यक अनुसार सब भन्दा कडा चेतावनी):
हृदय थ्रोम्बोटिक घटनाहरू , जस्तै हार्ट अटैक वा स्ट्रोक , जुन घातक हुन सक्छ, हुन सक्छ। जोखिम उपचारको शुरुमा देखा पर्न सक्छ र लामो प्रयोगको साथ बढ्न सक्छ।
Naproxen वा Ibuprofen को उपयोग सीएबीजी शल्य चिकित्सा को सेटिंग मा contraindated छ।
त्यहाँ जीआई रक्तस्राव, अल्सरेशन, वा पेट वा आन्द्राको छिद्र बढ्ने जोखिम छ, जुन सम्भावित घातक हुन सक्छ। यो कुनै पनि समयमा र चेतावनी बिना हुन सक्छ। वृद्धहरू वा पेप्टिक अल्सर रोगको इतिहास भएका / वा GI रक्तस्रावको अधिक जोखिममा रहेका बिरामीहरू। यी जोखिमहरूको कारण, बिरामीहरूले सकेसम्म कम समयको लागि सबैभन्दा कम खुराक प्रयोग गर्नुपर्दछ।
एनएसएआईडीहरू एलर्जीक प्रतिक्रियाहरूको पहिलेको इतिहास भएका बिरामीहरूमा दम, चकत्ते, वा एनाफिलक्सिस जस्ता रोगीहरूमा गम्भीर, सम्भावित घातक एनाफिलाक्टिक प्रतिक्रियाको जोखिमको कारण प्रयोग गरिनु हुँदैन।
हार्ट अट्याक पछि बिरामीहरूलाई एनएसएआईडीको उपचार हुँदैन।
कलेजोमा विषाक्तताको सानो जोखिम छ; बिरामीहरूलाई मतली, थकान, सुस्ती, पखाला, खुजली, पौंडी, दाहिने माथिल्लो चतुर्भुज कोमलता, र फ्लू जस्तो लक्षण जस्ता लक्षणहरू बारे सचेत हुनुपर्दछ, र लक्षण देखा परेमा आपतकालीन उपचार खोज्नु पर्छ।
उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) हुन सक्छ वा बिग्रन सक्छ।
हृदय असफलता भएका बिरामीहरूमा NSAIDs प्रयोग गर्नु हुँदैन।
दीर्घकालीन प्रयोगले मिर्गौलामा चोट पुग्न सक्छ। बिरामीहरूलाई मृगौलाको कार्यको लागि अनुगमित गरिनु पर्छ र यदि कमजोर गुर्दा समारोह छ भने NSAID को प्रयोग गर्नुहुन्न।
दम, नाक पोलिप्स, र एस्पिरिन संवेदनशीलता (एस्पिरिन-संवेदनशील दम) को लागी बिरामीहरुलाई NSAID बाट जोगिनु पर्छ।
गम्भीर छाला प्रतिक्रिया, जसमा एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, स्टीभेन्स-जॉनसन सिन्ड्रोम (SJS), र विषाक्त एपिडर्मल नेक्रोलिसिस (TEN) मीटर हुन सक्छ जो घातक हुन सक्छ र चेतावनी बिना देखा पर्न सक्छ। बिरामीहरूले NSAID लाई रोक्नु पर्छ र यदि छालाको प्रतिक्रियाको संकेत छ भने उपचार खोज्नु पर्छ।
एनीमिया NSAIDs को साथ उपचारित बिरामीहरुमा देखा पर्‍यो; यदि रक्तअल्पता को लक्षण वा लक्षण देखा परेमा बिरामीहरुलाई निगरानी गरिनु पर्छ।
NSAIDs, सूजन र ज्वरोलाई घटाएर, संक्रमण पत्ता लगाउन अझ गाह्रो हुन सक्छ।
दीर्घकालीन एनएसएआईडीमा बिरामीहरूलाई नियमित रूपमा सीबीसी र केम प्रोफाइलको साथ अनुगमन गरिनु पर्छ।
एनएसएआईडीहरू गर्भवती महिलाहरूमा weeks० हप्ता गर्भधारण (तेस्रो त्रैमासिक) मा प्रयोग गरिनु हुँदैन किनभने तिनीहरू भ्रुण डक्टस धमनी धमनीको अकाल बन्द हुन सक्छ। पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको दौडान, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्। एनएसएआईडीले पनि अण्ड्रोचनमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ; यदि तपाई गर्भधारण गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
नेप्रोक्सेन बनाम आइबुप्रोफेनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
नेप्रोक्सेन भनेको के हो?
नेप्रोक्सेन एक NSAID (नन्स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी औषधि) हो जुन दुखाइ र जलनको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो दुबै ब्राण्ड र जेनेरिक, र प्रिस्क्रिप्शन साथै ओटीसीमा उपलब्ध छ।
इबुप्रोफेन एक NSAID पनि हो जुन हल्का देखि मध्यम दुखाइ र सूजनको उपचार गर्दछ। यो दुबै ब्रान्ड र जेनेरिकमा प्रिस्क्रिप्शनको साथ वा ओटीसीको रूपमा उपलब्ध छ।
के नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेन उस्तै छन्?
दुबै औषधिहरू एफडीएद्वारा अनुमोदित एनएसएआईडीहरू हुन्। किनभने ती दुबै एनएसएआईडीहरू हुन्, नेप्रोक्सेन र इबुप्रोफेनसँग धेरै समानताहरू छन् तर उनीहरूसँग केहि भिन्नताहरू पनि छन्। विवरणका लागि माथि हेर्नुहोस्। अन्य एनएसएआईडीहरू सामेल छन् सेलेब्रेक्स (सेलेक्सोक्सिब, एक COX-2 अवरोधकर्ता), मोबिक (meloxicam), एस्पिरिन, र Relafen (nabumetone)। टायलनोल (एसिटामिनोफेन) NSAID होईन तर प्राय: शेल्फमा NSAIDs नजिक भेटिन्छ। टायलनोल ज्वरो र दुखाइको लागि उपयोगी छ तर ईन्फ्लेमेसनको उपचार गर्दैन।
के नेप्रोक्सेन बनाम आइबुप्रोफेन राम्रो छ?
माथि छलफल गरेझैं नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेन समान छन् र दुखाइ र सूजन कम गर्न दुवै प्रभावकारी हुन सक्छ। उनीहरूसँग उस्तै साइड इफेक्टहरू र जोखिमहरू छन्। प्रायः, यो व्यक्तिगत प्राथमिकताको कुरा हुन्छ कि कुन तपाईंको लागि उत्तम औषधी हुनेछ। निर्देशनको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
के म गर्भवती हुँदा नै नेप्रोक्सेन बनाम आईबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सक्छु?
नेप्रोक्सेन, आईबुप्रोफेन, वा कुनै पनि एनएसएआईडी गर्भावस्थाको तेस्रो त्रैमासिकमा प्रयोग गर्नु हुँदैन किनभने उनीहरूले भ्रुण डक्टस धमनी धमनीको अकाल बन्द हुन सक्छ। किनभने गर्भावस्थाको अन्य चरणहरूमा महिलाहरूमा एनएसएआईडी प्रयोगको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन, आफ्नो OB / GYN बाट परामर्श लिनुहोस्। यदि तपाईं हाल नै नेप्रोक्सेन वा आईबुप्रोफेन प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहुन्छ भने, निर्देशनको लागि तपाईंको डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्।
म रक्सीको साथ नेप्रोक्सेन बनाम आइबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सक्छु?
होइन। नेप्रोक्सेन वा आइबुप्रोफेन र मदिरा सेवन गर्दा ग्यास्ट्रिटिस (सुरक्षात्मक पेट अस्तरको सूजन) र जठरांत्र रक्तस्रावको खतरा बढ्न सक्छ।
यदि तपाइँ नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेन सँगै लिनुभयो भने के हुन्छ?
नेप्रोक्सेन र आईबुप्रोफेन सँगै नलिनुहोस्। तपाईंको लेबल जाँच गर्नुहोस्; अझ राम्रो, तपाईको फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस्, विशेष गरी संयोजन उत्पादनको साथ तपाईले एक पटकमा केवल NSAID मात्र लिइरहनुभएको छ भन्ने निश्चित गर्न। दुवैले लिनुले साइड इफेक्टको खतरा साथै पेट ब्लीडिंग र अल्सरलाई बढाउन सक्छ।
के नेप्रोक्सेन एक मांसपेशी आराम गर्ने वा पेन किलर हो?
नेप्रोक्सेन प्राविधिक रूपमा एक मांसपेशी आराम गर्ने छैन; यो एक दुखाइ औषधि हो र यसले जलनको साथ पनि सहयोग गर्दछ केहि लोकप्रिय मांसपेशी रिलक्सहरू फ्लेक्सेरिल (साइक्लोबेन्जाप्रिन) वा स्केलेक्सिन (मेटाक्सोलोन) सामेल छन्। यो भ्रामक हुन सक्छ किनकि यद्यपि नेप्रोक्सेन प्राविधिक रूपमा एक मांसपेशी आराम गर्ने क्षमता नभए पनि यसले हल्कादेखि मध्यम मांसपेशिको दुखाइमा मद्दत पुर्‍याउँछ, त्यसैले कहिलेकाँही मानिसहरूले यसलाई मांसपेशी आराम गर्ने ठानेका छन्।
के तपाइँ chlamydia को लागी azithromycin लिने बेला रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ
कसरी इन्सुलिन संग फ्रिज गर्न को लागी यात्रा गर्न को लागी
के एक खतरनाक रक्त शर्करा को स्तर मानिन्छ
कति दिन फ्लू संक्रामक छ